Nihotsahan’ny tany - ewa.mg
News - Nihotsahan’ny tany
Namoy ny ainy ny tovolahy iray nitrandraka vato, tany Mananara Avaratra, afak’omaly. Teo am-panaovana ny asany mihitsy izy no tototry ny tany. Nifamonjena saingy fotoana maro taty aoriana vao voasikotra sady efa tsy nisy aina intsony.
L’article Nihotsahan’ny tany est apparu en premier sur AoRaha.
Fankalazana ny 26 jona: miantso firaisankinam-pirenena ny CFM
“Amin’izao fankalazana ny faha-59 taon’ny Fahaleovantena izao, manao antso avo ho an’ny mpiray tanindrazana mba hanaja ny fiandrianam-pirenena fa izay no mampiavaka antsika amin’izao tontolo izao, ny saina sy ny hiram-pirenena; hanamafy ny firaisankinam-pirenena sy ny maha Malagasy antsika.”Io no nambaran’ny filohan’ny Komitin’ny fampihavanana malagasy (CFM), i Maka Alphonse, teny Ampefiloha, omaly, amin’izao fiatrehana ny faha-59 taon’ny niverenan’ny Fahaleovantenam-pirenena izao. Hankalazaina ny niverenan’ny Fahaleovantena sy ny fiandrianam-pirenena amin’izao. Ny maha firenena ny firenena iray izay.Anisan’ny maha izy azy ny firenena iray koa ny mponina ao aminy. Raha misavoritaka sy tsy misy filaminana ary tsy manaja ny fiandrianany ny mponina ao amin’ny firenena iray, tsy misy maha firenena azy.Ilaina ny fandriampahalemana maharitra “Koa amin’izao ankatoky ny fankalazana ny fetim-pirenena izao, mahafaly anay ato amin’ny CFM ny milaza amintsika fa miasa ara-panjakana hisian’izany firaisankinam-pirenena izany izahay”, hoy izy. Satria izay no maha firenena ny firenena iray. Anisan’ny manimba izany ny politika. Handrindra ny fiarahamonina ny politika, nefa natao handrafesana sy hiadiana ny politika eto amintsika.Anisan’ny imasoan’ny CFM amin’izao fotoana izao ary anaovany fitetezam-paritra ny tsy hisian’ny fanelingelenana sy fandravana ny firaisankinam-pirenena. Misy ny tetikasa iarahany amin’ny Firenena mikambana (ONU) mba hisian’ny fandriampahalemana maharitra. Eo ny fisorohana mba tsy hisian’ny olana amin’izany.Raha misy ny olana: ahoana no handravonana azy? Misy ny lafiny ara-toekarena, ara-tantara… Izay no mahatonga ny CFM miantso sy miasa amin’izay hisian’ny filaminana sy fitoniana sosialy. Misy lafin-javatra telo mifandraika: raha tsy misy ny fahamarinan-toerana politika, tsy hisy ny asa fampandrosoana. Anisan’ny manamafy izay hisian’ny filaminana ara-politika sy sosialy ary ny fiarahamonina ny eo anivon’ny CFM amin’ny fametrahana fandriampahalemana maharitra, hiarahana eo amin’ny ONU.R.Nd.L’article Fankalazana ny 26 jona: miantso firaisankinam-pirenena ny CFM a été récupéré chez Newsmada.
News - Rugby - Sport - News Mada
Rugby – « Gold Top 20 »: hanala vela amin’ny Cosfa ny JSTA
Mbola hitohy, ny alahady izao, ny lalao ampahefa-dalana hiadiana ny amboara “Gold Top 20”, taranja rugby. Lalao hatao eny amin’ny kianjan’ny Makis Andohatapenaka. Hitsapa vintana manoloana ny Cosfa indray ny ekipan’ny JSTA Ambondrona, rehefa tsy nahita mangirana mihitsy nandritra izay lalao rehetra nifanandrinan’ny roa tonta. Efa manana traikefa ambony miohatra lavitra rahateo ny ekipan’ny Cosfa Analamanga ka ho sahirana ny JSTA. Ankoatra izay, ho hita soritra ao anatin’ny fandaharan-dalao, rahampitso, ihany koa ny lalao eo amin’ny XV Fa Ampasika sy ny TFA Anatihazo. Adin’ny samy kalaza ity lalao ity, saingy manana tombony kokoa ny TFA Anatihazo, raha hiverenana ny lalao efa nataony nandritra ity fiadiana ny “Gold Top 20” ity. Mi.Raz Fandaharan-dalao, rahampitso: ¼-dalana « Elite fédéral Top 20 »: XV Fa Ampasika vs TFA Anatihazo Cosfa Analamanga vs JSTA Ambondrona ¼ -dalana « Challenge Elite Fédéral » : Boeny Rugby vs 3F5 Amboditsiry STM Savonnerie vs UIRC Fivondronana FTM Manjakaray vs 3FB FahasalamanaL’article Rugby – « Gold Top 20 »: hanala vela amin’ny Cosfa ny JSTA a été récupéré chez Newsmada.
Ambadiky ny Kianja Maki: jiolahy telo tratra nitondra rongony
Nidoboka am-ponja, ny alakamisy teo ireo jiolahy telo nitondra rongony tanaty baoritra tratran’ny polisy teny ambadiky ny Kianjan’ny Maki Andohatapanekana, ny alarobia lasa teo. Nandritra ny fisafoana nataon’ny polisy avy ao amin’ny kaomisarian’ny boriborintany fahafito (CSP7) no nahitana jiolahy roa nitondra baoritra lehibe nifanena tamin’ny polisy nanao fisafoana. Somary kaodikaody avy hatrany izy roa lahy raha vao nahita ireo polisy ka niroso tamin’ny fisavana azy ireo, tamin’izany no nahitana fonosan-drongony lehibe iray tao anaty entan’izy ireo. Nandritra ny famotoran’ny polisy azy ireo teo anivon’ny kaomisaria dia niaiky ny heloka vitany izy roa lahy ary nanondro ny lehilahy iray fividianan’izy ireo izay eny Andranoambo Andohatapenaka. Tratra tao an-trano ilay lehilahy mpivaro-drongony tamin’io fotoana io. Nilaza izy nandritra ny famotoran’ny polisy fa efa an-taony maro no nanao ity asa ity. Eny amin’iny faritra IVO iny no mpamatsy rongony azy ireo fa nilaza ho mpivarotra fotsiny koa ilay lehilahy nividianan’izy roa lahy ireto. Tsy mety ho fongana mihitsy ity resaka trafikana zava-mahadomelina ity. Matoa ireny mbola tafiditra eto amintsika dia mazava ho azy fa malalaka ny lalana miainga avy any am-potony.J.CL’article Ambadiky ny Kianja Maki: jiolahy telo tratra nitondra rongony a été récupéré chez Newsmada.
Tsy mitovy ny fototra niaingana: miteraka resabe ny fanarahana fomba
Mibahan-toerana ao anaty « facebook” indray ny fanarahana ny fomba amam-panao malagasy. Tsikaritra fa ampifandonina amin’ny fomba amam-panao na amina finoana nampidirin’ny vahiny eto izy io. Hatreto anefa, sarotra ny handravona ho iray ny hevitra mipoitra amin’ny tranga tahaka itony satria tsy mitovy ny fototra niaingana. Ao ireo mankahala mafy ny fomba amam-panao malagasy noho ny tsy fananana na ny tsy fahampian’ny fahalalana momba izany. Misy koa ny manosika sy mandà mafy ireo fombam-bahiny noho ny fahitana sy ny fahenoana ary ny fahalalana tantara…Ny tsy azo hadinoina, nanana hevi-dalina ny fampiharana ny « zarazarao hanjakana ». Tsy tokony hiaina intsony ao anatin’izany ny fomba amam-panao malagasy. Manjary mitarika any amin’ny fahalemen’ny kolontsaina malagasy iray manontolo mihitsy ny fisian’io paikadin’ny mpanjakazaka an-tanin’olona io raha mbola tazana amin’izao vanim-potoana fiverenana eny an-doharano izao!HaRy RazafindrakotoL’article Tsy mitovy ny fototra niaingana: miteraka resabe ny fanarahana fomba a été récupéré chez Newsmada.
Vivo Energy : 10 000 litres de carburants pour le CCO
Remise de don au Coordinateur général du CCO Les appuis du secteur privé à la lutte contre la Covid-19 continuent d’affluer. Cette fois-ci ; c’est Vivo Energy Madagascar qui s’y est mis en faisant don de 10.000 litres de carburant, de 100 matelas ainsi que de 100 pulvérisateurs au Centre de Commandement Opérationnel Covid-19 (CCO). Le don qui entre dans le cadre de la gestion de la lutte contre la pandémie de coronavirus a été reçu par le coordonnateur général du CCO. Il traduit l’engagement de Vivo Energy Madagascar à soutenir les autorités et les communautés: « Conscient de notre responsabilité sociale et citoyenne face à l’épidémie de COVID-19 à Madagascar, nous tenons à apporter notre soutien face aux efforts déployés par l’Etat malagasy afin d’endiguer cette pandémie. Par notre geste nous voulons apporter notre contribution matérielle au Centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19 ainsi qu’aux malades, leur permettant de faire face à cette crise sanitaire », a déclaré Mondher Bouhouche, Directeur général de Vivo Energy Madagascar. Vivo Energy, l’entreprise qui distribue les produits de la marque Shell, continuera d’apporter son appui aux communautés locales en vue de limiter les conséquences socio-économiques de cette pandémie et favoriser à terme la reprise. R.Edmond L’article Vivo Energy : 10 000 litres de carburants pour le CCO est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Vivo Energy : 10 000 litres de carburants pour le CCO a été récupéré chez Midi Madagasikara.
KITRA – FIAINANA MPILALAO :: “Nanosika ahy ho Barea ny antson’ny tanindrazako”, hoy i Jeremy Morel
Efa isan’ireo niatrika ny fanazarantena niarahana teny amin’ny kianjan’ Andralanitra, omaly, i Jeremy Morel, vodilaharan’ ny klioba frantsay mifaninana ao amin’ny “Ligue 1”, Olympique Lyonnais (OL). “Hitondra aina vao ho an’ny fiarovan-tenan’i Madagasikara ny fahatongavan’i Jeremy Morel, miaraka amin’i Thomas Fontaine sy Jérôme Mombris”, araka ny nambaran’i Nicolas Dupuis, mpanazatra teratany Frantsay mitantana ny Barean’i Madagasikara. Efa nahavita lalao tamin’ny naha matihanina azy dimanjato, izay tao amin’ny “Ligue 1” ny ankamaroany, i Jeremy Morel. “Hoentiko hanampiana ny mpiray tanindrazana amiko, amin’ ny alalan’ny fiarovana ny voninahi-pirenena, ny traikefa ananako”, hoy izy. Na tsy misy Rakoto na Rabe na Andria ny anaran’ity mpilalao ity dia misy ra malagasy mikoriana ao anatiny satria teraka tany Antsiranana ny rainy. Tany Frantsa kosa no nahitany masoandro, 34 taona lasa izay. Nanomboka nilalao baolina kitra tao amin’ny ivon-toeram-piofanan’ny FC Lorient izy, tamin’ny taona 1994. Tamin’ny taona 2003 no nanomboka nilalao tamin’ny maha mpilalao matihanina azy izy, tao amin’ny “Ligue 2”. Ny taona 2006 kosa no nanomboka nifaninana tao amin’ny fifaninanam-pirenena frantsay “Ligue 1” ity vodilaharana malagasy ity. “Tsy hijerena fiaviana ny fiarovana ny tanindrazana. Rehefa miantso anao ny firenena dia ilainy ianao. Mametraka ny fitiavako amin’izay tiako hametrahana azy aho dia i Mada- gasikara”, hoy hatrany i Jeremy Morel. Milanja 72 kg ary mirefy 1,72 metatra ny lehilahy, izay tonga taorian- dry Thomas Fontaine, Romain Metanire, William Gros ary Jerôme Mombris, hanampy ny Barean’i Madagasikara ary mizaka ny zom-pirenena malagasy. Efa nahazo ny amboaran’ny tompondaka sy ny amboaran’i Frantsa niaraka tamin’ny ekipan’i Marseille izy ny taona 2011 sy 2012. “Efa zatra ady izy ka ilaina”, hoy i Nicolas Dupuis. L’article KITRA – FIAINANA MPILALAO :: “Nanosika ahy ho Barea ny antson’ny tanindrazako”, hoy i Jeremy Morel est apparu en premier sur AoRaha.
Tsenam-paritra Comesa: miomana hiatrika ny foara i Madagasikara
Natao, omaly, ny fiofanana ho fanomanana hiatrehana ny foaran’ny tsenam-paritra Comesa, andiany faha-21, hatao any Nairobi Kenya, ny 17 hatramin’ny 28 jolay ho avy izao. Hisy mpandraharaha tsy miankina eto Madagasikara handray anjara amin’io foara io, ka anisan’izany ny avy amin’ny vondron’ny mpandraharaha ao amin’ny Sendikan’ny indostria eto Madagasikara (Sim), ny orinasa afakaba (Gefp), ny sendikan’ny mpamokatra biolojika Symabio, ny mpanondrana vokatra Horeb, sns.Nambaran’ny filohan’ny filakevi-pitantanan’ny Sim, Hassim Amiraly, fa tanjona amin’ity fiofanana ity ny hamantaran’ny mpandraharaha eto Madagasikara bebe kokoa ny fomba fiasan’ny tsena Comesa satria maro no tsy mahafantatra. Ao anatin’izany ny fifanarahana misy ao aminy, ny lalàna na ny fitsipika na fepetra takiny, sns.Tsy mandoa haba ny entana afaranaNilaza koa ny PCA-n’ny Sim, fa mila fantarina ny tombontsoa tokony ho azontsika, satria raha ny zava-misy, vitsy ny entana aondran’i Madagasikara eo amin’ny Comesa, nefa maro ny afarana amin’ny alalan’ity tsenam-paritra ity. Tsy mandoa haba na hetra anefa ireny entana ireny rehefa miditra eto Madagasikara.Anisan’ny nohadihadiana nandritra ity fiofanana ity, ny fahalalana sy ny fomba fiasan’ny tsenam- paritra , ny fitsipika sy ny lalàna, ny mikasika an’i Madagasikara manokana ao amin’ny Comesa. Nofakafakaina koa ny olana efa nitranga tao anatin’ity tsenam-paritra ity. Nampahafantarina ny dingana hatao sy ny fanomanana amin’ny fomba fikarohana lalam-barotra na mpiara-miombon’antoka, sns.Njaka Andriantefiarinesy En encadré:Miisa 21 ny firenena mpikambana ao amin’ny Comesa (Common market for eastern and southern Africa), tsenam-paritra ho an’ny tapany atsinanana sy atsimon’i Afrika: Madagasikara, Burundi, Kaomoro, RD Congo, Djibouti, Egypta, Erythrée, Etiopia, Eswatini, Kenya, Libya, Malawi, Maorisy, Rwanda, Seychelles, Somalia, Soudan, Ouganda, Zambia, Zimbabwe. Ireto kosa ny firenena niala tsy ho mpikambana intsony : Mozambika (1997), Lesotho (1997), Tanzania (2000), Namibia (2004), Angola (2007).L’article Tsenam-paritra Comesa: miomana hiatrika ny foara i Madagasikara a été récupéré chez Newsmada.
Fikambanan’ny mpianatra – Anjerimanontolo: “Mila jerena ny tohana sosialy sy fahasalamana”
Mitsipaka ny fangatahan’ny mpianatra sasany monina eny amin’ny Cité U hody any amin’ny ray aman-dreniny isam-paritra ny fikambanan’ny mpianatra avy amin’ny faritra 22.“Mbola eto Analamanga no be tranga vaovao amin’ny valanaretina Coronavirus ka mety hampirongatra ny fiparitahany ny fiverenan’ny mpianatra any amin’ny faritra niaviany”, hoy ny mpitondra tenin’ny fikambanana, i Manato, omaly teny Ankatso. Noho ny hamehana kosa, mangataka ny hijeren’ny minisitera mpiahy ny fiahiana sosialy sy ny fahasalamana ireo mpianatra eny amin’ny Cité U. Indroa nizarana vatsy tsinjo isan-trano ny mpianatra ary nisy ny tsena mora indray mandeha. Maniry ny hametrahana foibem-pitsaboana eny amin’ny trano fonenan’ny mpianatra izy ireo hizaha ny fahasalamana. Tsy misokatra ny medecine preventive mikarakara ny fahasalaman’ny mpianatra ka voatery manatona eny amin’ny CSB ireo tsy salama. Efa nisy ny taratasy nalefa teny anivon’ny minisitera mpiahy momba ireo fangatahana rehetra ireo ary nisy toky fa hijery vahaolana ny tompon’andraikitra, miandry ny daty fanatanterahana.Momba ny fampianarana, mangataka ny hanendren’ny fitondrana minisitra hisahana ny fanabeazana fa mavesatra ny andraikitry ny minisitry ny Fampianarana ambony mikarakara minisitera roa lehibe. Lasa tsy mifantoka amin’ny fampandehanana ny fampianarana ambony ny minisitra misolo toerana ny minisitry ny Fanabeazana. Ho an’ny tetiandro fidirana amin’ny taom-pianarana vaovao, tsy mbola misy tapaka ny fotoana hifaranan’ny taom-pianarana taloha sy fanombohan’ny vaovao ka tokony ho tony sy hanaraka vaovao ofisialy ny mpianatra sy ny ray aman-dreny. Tsy mbola nahavita ny fandaharam-pianarana ho an’ny 2018-2019 ny fakiolten’ny Haisoratra sy ny siansa maha olona, ny Siansa, ny politeknika…Vonjy A.L’article Fikambanan’ny mpianatra – Anjerimanontolo: “Mila jerena ny tohana sosialy sy fahasalamana” a été récupéré chez Newsmada.